Annaga nagu saabsan - Shenzhen Wofly Technology Co., Ltd.
Wofly waxa ay u bilawday sidii soo saaraha nidaamiyayaal, gaas gaas badan, qalabyada tuubooyinka, valves-yada kubbada, shalalka irbada, jeegaga valves & valves solenoid.Hadafkayagu waa inaan siino macaamiisheena ugu kalsoonaan karo, saxnaanta iyo tayada sare ee alaabta.
Dhammaan naqshadeynta iyo soo saarista alaabada Wofly waxay si adag u waafaqsan yihiin ISO.Ka sokow, Wofly sidoo kale waxay heshay shahaadooyinka Rohs, CE iyo EN3.2 ee alaabteeda warshadaha iyo caafimaadka.
Ujeedada shirkadeena waa inay bixiso adeega ugu xirfadaysan ee ay heli karaan macaamiisheena.Tan waxaa lagu gaaraa iyada oo loo marayo walxaha isku dhafan ee daacadnimada, kalsoonida, iyo aqoonta khabiirka ee alaabta aan iibino.Ku qanacsanaanta macaamiisha ayaa had iyo jeer ahayd yoolka ugu weyn ee Wofly.Waxay ku dadaalaysaa inay ka soocdo tartamayaasha kale iyada oo siinaya wax soo saarka tayada sare leh, qiimaha tartanka, iyo sidoo kale waxqabadka bixinta degdegga ah.Marka laga reebo summadeeda gaarka ah, Wofly waxay sidoo kale siisaa adeegga OEM/ODM shirkadda caanka ah ee adduunka oo dhan si ay ugu habboonaato baahiyaha macaamiisha kala duwan ugana caawiso macaamiisheena inay hagaajiyaan badbaadada, amniga, iyo helitaanka nidaamyada gaaska.
Si aad u noqoto "Hal-Stop Total Solution Provider" macaamiisheena qiimaha leh oo dhaafsiisan filashooyinka alaabta iyo taageerada.
Si aan sare ugu qaadno awoodeena annagoo la korarayna la-hawlgalayaashayada ganacsi, si wanaagsan ugu adeego macaamiisha oo aan si wadajir ah ugu guuleysanno kobcinta xiriir shaqo oo wanaagsan
Hubi in heerka sare ee kaalmada macmiilka oo dhan.Ku bixi alaab tayo wanaagsan leh oo qiimo jaban ah.Bixinta adeegyo taageero farsamo iyo alaab ah oo degdeg ah.Ku-ilaalinta wakhtiga ku-meel-gaadhka ah ee kaydka iyo helitaanka agab-ka-faa'iidooyinkeeda.
Anagoo ah ganacsigeena udub-dhexaadka u ah diiradda saaraya xeebaha iyo Saliidda & Gaaskabeerta,waxaa naga go'an inaan kordhino wax soo saarka kale si aan si wanagsan u daboolno baahida isbedesha ee macaamiisheena oo aan nafteena uga dhigno ciyaaryahan muhiim ah goobtan.